बुवाको सपना पुरा गर्ने अठोटमा विदेश छाडें , अब जिल्लाबासीको सेवा गर्छु ः डा. नौसाद | Sima Post
बुवाको सपना पुरा गर्ने अठोटमा विदेश छाडें , अब जिल्लाबासीको सेवा गर्छु ः डा. नौसाद
जिल्लाको सदुरमकाम कलैयामा रहेर नीजि क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्था मार्फत सुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर जिल्ला भर पहिचान बनेकोे एउटा नाम हो डा.कमरुल हक ।
निकै अनुभवि डा.कमरुल जीवनको उत्तरार्धसम्म विरामीको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । बिरामीको सेवागर्दा गर्दै ७२ बर्षको उमेरमा २०६७ मा वहाँको निधन भयो । हजारौं सेवाग्राहीका लागि यो घटनाले निकै मर्माहत बनायो । वहाँको निधन भएको जानकारी नपाउनेहरु क्लिनिकको गेट सम्म आउने र फर्कने क्रम कहिल्यै रोकिएन । लामो समय सेवा दिनुभएका हकले लाखौंका जीवन बचाउनु भएको थियो । वहाँ जिल्लाकै पहिलो डाक्टर समेत हुनु हुन्थ्यो ।
बालरोग विशेषज्ञका रुपमा नेपाल सरकारको उच्च पदमा रहेर वहाँले देशभरी सेवा गर्नु भएको थियो । धेरै अञ्चल अस्पतालहरुमा मेडिकल सुपरिटेन्डेनको रुपमा समेत काम गर्नु भएको थियो । जीवनको लामो समय सरकारी सेवा गर्नु भएका हकले अवकाशपछि कलैयामा निजी क्लिनिक संचालन सुरु गर्नु भएको थियो ।
जिल्लाका विपन्न गरिबहरुको कम खर्चमा चौविसै घण्टा उपचार सेवा प्रदान गरेर गहिरो सम्बन्धको छाप बनाउनु भएका डा.हकको उपचारबाट धेरैले नयाँ जीवन पाएका छन् । वहाँको निधनपछी केही बर्ष बन्द रहेको क्लिनिक यतीबेला वहाँका जेठाछोराले सम्हालि रहनु भएको छ ।
स्वर्गिय डा.हकले आफ्नो जविनभरको कामई आफ्ना दुई छोरा नौसाद र सर्फराज हकलाई डाक्टर बनाउन खर्च गर्नु भएको भएको रहेछ । जेठाछोरा नौसादले स्कलरसिपमा कजाकिस्तानको अलबाटीबाट एम.वि.वि.एस. गर्नु भएको छ । एम.वि.वि.एस. सकेर त्यहीँको सिटी अस्पताल जागिर खाँदै हुनुहुन्थ्यो । जेनरल सर्जन र फिजिसिन डा.नौसाद बालरोगका अनुभवी डाक्टर समेत हनुहुन्छ । वहाँका कान्छा भाई सर्फराज बंगलादेशमा एम.वि.वि.एस. सकेर थप अध्यायन क्रममा अमेरिकामा बस्दै आउनु भएकोछ । भाईकी पत्नी समेत डाक्टर हुनुहुन्छ ।
वहाँहरुको कलैयामा आफ्नै घर छ । सोही घरमा स्वर्गिए हकले क्लिनिक चलाउने गर्नु हुन्थ्यो । वहाँको मृत्यपछी परिवारका अन्य सदस्य विरगजं बस्न थाले । त्यसयता सुनसान बनेको कलैयाको क्लिनिक पुनः संचालन गर्ने विषयमा परिवारमा सल्लाह भयो । आफ्नै देशमा बसेर जिल्लाबासीको सेवा गर्ने सोच बनाएर कजकिस्तानको राम्रो जागिर अनि कमाई छाडेर बाबुको बिडो सम्हाल्ने निधो आफुले गरेको डा. नौसादले बताउनु भयो ।
बाबुले स्थापना गर्नु भएको क्लिनिकलाई अस्पतालमा परिणत गरी संचालनमा छ । तर हाल क्लिकिल सेवा मात्रै वहाँले आफै बसेर सेवा दिइरहनु भएको छ । बालरोगसँगै सबैखाले विरामीको उपचार गर्दै दिनभर ब्यस्त रहेने गरेको नौसाद बताउँनु हुन्छ । दैनिक ४०,५० जना विरामीको सेवा गरिरहेको हुन्छु । त्यसमा पनि आधादर्जन बढि गरिब विपन्न हुन्छन् । वहाँहरुलाई निशुल्क सेवा दिँदै आएको छु । करिब ५ बर्षदेखी कलैयामा सेवा गर्दै आएको र हाल सम्म ५ सयबडि सर्वसाधार विरामीको न्युन खर्चमा अपरेसन समेत गरेको वहाँ सुनाउनु हुन्छ । हर्निया, पाठेघर, पित्तथैली, एपन्डीसाईडका समस्या भएकाहरुको सामान्य खर्चमा उपचार गरेको वहाँको भनाई छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारि लकडान निशेषाज्ञ भएका बेलामा समेत कहिल्यै सेवा बन्द भएन । ग्रामिण क्षेत्रका गरिब विपन्न विरामीहरुको सेवालाई ध्यानमा राखेर चौविसैघण्टा क्लिनिक संचालन गरिएको वहाँ बताउनु हुन्छ । आफुले उपचार गरेका हजारौं विरामी निको मात्रै नभएर सन्तुष्ट पनि हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पछिल्लो समय ब्यापार र चिकित्सकहरु ब्यापारि भएको वहाँको बुझाई रहेछ । सेवाक्षेत्रलाई ब्यपार बनाईदा चिकित्सा सेवामा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको प्रति आफु चिन्तीत हुने गरेको डा. नौसाद बताउनु हुन्छ ।
आफु हुर्किएको र बुवाले जोडेको यो पुर्खौली पेशालाई आफ्नै घरमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल संचालनको तयारी भैरहेको डा. नौसादले सुनाउनु भयो । डा.कमरुलहक मेमोरियल अस्पताल प्रा.लि. संचालनको सम्म सबै काम सकेर अहिले उद्घाटन गर्ने सोचमा थियौं । तर कोभिडले समस्या बनायो । भेन्टीलेटर सहितका आधुनिक र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सामाग्री सहित विभिन्न रोगका विषेशज्ञहरुको साथमा जिल्लाकै उत्कृष्ठ अस्पताल संचालन गरि सहज र सुलभ सेवा दिने बुवाको सपना थियो । बुवाको त्यो सपना पुरागर्ने सोचका साथ काम अघि बढेको डा. नौसादले सुनाउनु भयो । हाल भवनको मर्मत र आन्तरिक सजावटको काम भैरहेको उनले बताए ।
विगत ८ बर्ष देखी नेपाल चिकित्क संघ नारायणीको संचालक समिति सदस्य समेत रहनु भएका डा. नौसाद पछिल्लो समेय विभिन्न सामाजिक सेवामा समेत सक्रियहको बताउनु हुन्छ ।
स्व. डाक्टर कमरुल हककै झल्को दिने गरि छोरा डाक्टरले समेत भरपर्दो र सुलभ सेवा दिने गरेको वहाँको क्लिनिकमा उचपारमा आएकाहरुले समेत बताउने गरेका छन् ।
सीमा खुलाउन माग गर्दै नाकामा आन्दोलन
के नेकपाको चाभी चिनियाँ राजदूतको हातमा छ ?
हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै बिरगंजमा प्रदर्सन
माईतीघरमा चिनियाँ हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदर्शन, ‘ब्याक अफ चाईना’को नारा (फोटोफिचर)
43 mins अफिले
53 mins अफिले